China Galvanized Corrugate Steel Sheet Fa Steel Roofing Sheet Tile factory sy mpanamboatra | Mandresy
Taratasy vy mitafo fanitso ho an'ny taila vy eo an-tampon'ny vy
Fonosana vita amin'ny vy mifono vy (ravina mitafo vita vy) vita amin'ny vy vita amin'ny vy. Aorian'ny famolavolana mangatsiaka amin'ny alàlan'ny modely dia lasa ilay ravina mihombo izy io. Ny vokatra dia manana karazana noforonina isan-karazany sy famaritana, toy ny Wave type, Trapezoidal type, Glazed type. Raha be mpampiasa amin'ny tafo izy io, dia antsoina koa hoe lambam-baravarana.
Win Road International Trading Co., Ltd dia manana tsipika famokarana iray ho an'ny ravin-tsavoka, afaka mamokatra karazana isan-karazany arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa. 30,000 (telopolo arivo) taonina ny famokarana isan-taona.
Mora sy falifaly
Ampiasaina be amin'ny firafitra vy
Ny habe sy ny karazany isan-karazany. Azo ampiasaina namboarina.
kilasy DX51D, SGCC, SGCH, SGLCC, SGLCH, Q195
Steel mifototra Vy nandrisika, na vy Galvalume arakaraka ny takiana
Sakany (Azo alaina manokana) Alohan'ny ahodin-drano: 1250mm 1219mm 1200mm 1000mm 914mm 762mm
Aorian'ny famolahana: 360mm-1200mm
Hatevin'ny rindrina 20-275 g / ㎡
Fitsaboana ambonin'ny tany Andiana galvanisika: chromated, menaka
Andian-dahatsoratra Galvalume: anti-rantsantanana, Tsy fanoherana rantsantanana
Haben'ny ravin-kazo mitafo sy famaritana
Ny valizy mitafo fanitso dia be mpampiasa amin'ny fananganana sy ny rafitra vy. Rindrina vy, takelaka tafo, kaontenera, indostrian'ny fiara, fitaovana ao an-trano.
Taratasy antirust + plastika + ravina vy mifono, mifatotra amin'ny tadiny vy, ary asio paleta arakaraka ny takiana.
Entana amin'ny fitoerany: pallet + vy vy nohamafisina.
Ampidirina amin'ny ankapobeny: tsy misy paleta
(2) Ny sakany, ny halavany
3. Karazan-vokatra inona no ho azoko eo amin'ny "sponjy mahazatra, sponjy lehibe, sponjy kely ary sponjy zero"?
–Ny vokatra dia azo ampanjifaina amin'ny habe, ny hateviny, ny sakany, ny hatevin'ny fonony, ny fanontana amin'ny logo, ny famonosana. Satria namboarina manokana ny fepetra takiana, koa mifandraisa azafady ny fivarotana mba hahazoana valiny marina.
Teo aloha: Takelaka mitafo vita amin'ny lamba mifono loko miendrika ravin-tampon-trano
Manaraka: Takelaka vy nandrisika 0.35mm 0.45mm DX51D + Z